टास्को: यो तपाईंको मार्केटिंग कार्यहरूको आउटसोर्स गर्ने समय हो Martech Zone
आइतवार, अप्रिल २,, २०१। सोमबार, अप्रिल 17, 2017 Douglas Karr
वर्षौंदेखि, हामीले याद गर्‍यौं कि हाम्रा ग्राहकहरूसँग अपेक्षाहरू प्रायः बढ्दछन् जबकि सment्लग्नताको लागत छैन। वास्तवमा, गत वर्ष हामीले हाम्रो ग्राहकहरूको लागि थप काममा वर्षौं बर्ष १ 15% खर्च्यौं। हामीसँग संसाधनहरू भएको भए यो ठूलो हुने थियो, तर हामीले सोचेनौं। यदि हामीले हाम्रो एजेन्सी स्वस्थ राख्ने आशा राख्यौं भने हामीले केही कठोर परिवर्तन गर्नुपर्‍यो।
एउटा सेवा जुन हामीसँग आयो टास्को। टास्कोले एक परिष्कृत कार्य प्रबन्धन प्रणाली निर्माण गर्‍यो, प्रतिभाको साथ खुवायो, र यसलाई एक मजबूत बहु-चरण समीक्षा संरचना लागू गर्नुभयो। परिणाम एक अत्यधिक भरपर्दो र सटीक टास्क मैनेजमेन्ट सेवा भएको छ जुन परिणामa99% ग्राहक संतुष्टि दरमा आएको छ।
हामीले प्रणालीलाई हाम्रो ग्राहकहरूको लागि जाँचमा राख्ने निर्णय ग ,्यौं इन्डियानापोलिस कीट नियन्त्रण कम्पनी जब हामी गहिराइ लेख र ग्राफिक्समा उनीहरूले काम गरेका कीटहरूको प्रकारहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै थिए, हामीले सोचेका थियौं यो राम्रो छ यदि हामी उनीहरूको सामाजिक मिडिया आउटलेटहरूमा प्रति-दिन तथ्य पोस्ट गर्न सक्दछौं भने। टास्कोमा हामीले specific० घण्टा समय खोज्यौं र कीट-सम्बन्धित तथ्या .्कहरू पत्ता लगायौं धेरै खास कीटहरूका लागि र हामीले निर्दिष्ट गरेका ती तथ्या .्कहरू गत वर्षको मितिमा अप्ट-डेट हुनै पर्छ।
हामीले डाटाको लागि मात्र माग गरेनौं, हामीले फिर्ता पठाएको फाईललाई आयात गर्नका लागि पनि फर्म्याट गर्न अनुरोध गर्‍यौंHootsuite को बल्क शेड्युलर। एक हप्ता पछि, हामीले हाम्रो फाईल प्राप्त गर्यौं र यो उत्तम थियो! आन्तरिक रूपमा, हामीले मौसमसँगै कीटहरूसँग समयको लागि केहि साना समायोजनहरू बनायौं प्रत्येक अपडेटको लागि सment्लग्नता र निर्दिष्ट छविहरू अधिकतम बनाउन। परिणाम यो थियो कि हामीसँग ट्विटर, फेसबुक, र Google+ मा बाँकी वर्षको लागि अनुसूचित प्रति दिन कीटनाशक तथ्य थियो!
त्यो केवल एक उदाहरण हो कि कसरी टेस्को प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर हामी विश्वास गर्दछौं कि यो एकदम राम्रो प्रयोग हो! प्राय: अनुरोध गरिएको आम मार्केटिंग समर्थन कार्यहरू भनेको नेतृत्व पहिचान गर्नु, सम्पर्क सूचीलाई समृद्ध पार्ने, सामाजिक मिडियाको लागि सामग्री सिर्जना गर्ने, निर्णय लिनेहरूको पहिचान गर्ने, वा अनलाइन सामग्री फैलाउने हो।
यहाँ केहि मार्केटिंग टास्कले प्रदर्शन गरेका छन्:
लिंक्डइनमा उपयुक्त सम्पर्कहरू फेला पार्नुहोस्, सम्पर्क जानकारी खोजी गर्नुहोस् र नयाँ सम्पर्कहरू सीआरएममा थप्नुहोस्।
रेकर्ड 600०० ले बिक्रीमा आधारित भौगोलिक स्थान र कार्य शीर्षकको लागि स्प्रिेडसिटमा अग्रणी गर्दछ।
उत्पादनहरू थप्नुहोस्, विवरणहरू, वर्णन, चित्रहरू आदि सहित मेरो शॉपिफाई खातामा।
इन्स्टाग्राममा सेयर गरिएको शीर्ष १० फोटोहरू चयन गर्नुहोस् विगत २ hours घण्टा भित्र निश्चित ह्याशट्यागको साथ ट्याग गरिएको।
जर्मन स्टार्टअपको सूचकांक सिर्जना गर्दै जुन गत १२ महिनामा मोबाइल एप्लिकेसन नभएको श्रृंखला श्रृंखला वा श्रृंखला A कोष प्राप्त गरेको छ।
२०k मुनि अलेक्सा रैंकको साथ स्विडेन वेबसाइटहरूको सूची प्रदान गर्नुहोस्, अ supports्ग्रेजी समर्थन गर्दछ, र विज्ञापन प्लेसमेन्टलाई समर्थन गर्दछ।
अन्तर्वार्ता लिनुहोस् (२:२:2:००)
फेसबुक मेसेन्जर बोटका लागि कुराकानीहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
वर्ड कागजातमा केस स्टडीका लागि हस्तलेखन नोटहरूको धेरै पृष्ठहरू डिजिटलाइज गर्नुहोस्। बुझीएको कुनै पनि चीज हाइलाइट गर्नुहोस् र रेखाचित्रमा टाँस्नुहोस्।
मूल्य निर्धारण सरल छ - मानक डेलिभरीको लागि प्रति घण्टा $ अमेरिकी र एक्सप्रेस वितरणको लागि प्रति घण्टा US १० अमेरिकी।
टास्को लाई टास्क दिनुहोस्
टैग: मार्केटिंग अनुसन्धानबजार कार्यमार्केटिंग कार्यहरूटास्को